नेकपा (मसाल) का महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहले मालदिभ्स घटनाका सम्बन्धमा २०७४ माघ २३ गते एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै भन्नु भएको छ–“मालदिभ्समा घटेका घटनाहरूलाई नेकपा (मसाल)ले गम्भीर रूपमा लिन्छ । त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले पूर्व राष्ट्रपतिका विरुद्ध लगाइएको आरोपलाई राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित भनेर उनलाई सफाइ दिने फैसला गरेको छ । त्यसका साथसाथै विपक्षका राजबन्दीहरूलाई पनि रिहाइ गर्ने आदेश दिएको छ ।
वर्तमान राष्ट्रपतिले सर्वोच्चका त्यस प्रकारका निर्णयलाई पालन गर्न अस्वीकार गरेपछि सर्वोच्चले उनलाई पक्राउ गर्ने आदेश दिएको थियो । त्यहाँका प्रहरीका आई.जी.पी. ले सर्वोच्चको आदेशलाई पालना गर्ने बताएका थिए । तर वर्तमान राष्ट्रपतिले उनलाई (प्रहरीका आई.जी.पी. लाई) पनि बर्खास्त गरे ।
वर्तमान राष्ट्रपतिले देशमा सङ्कटकाल लगाउने र न्यायाधीशहरूलाई गिरफ्तार गर्ने समेत काम गरेका छन् । हाम्रो पार्टीले त्यस प्रकारको कारवाहीलाई प्रजातन्त्रमाथिको गम्भीर प्रकारको कुठाराघात ठान्दछ र त्यसको परिणामस्वरूप त्यहाँ अधिनायकवादी शासन कायम हुने खतरा उत्पन्न भएको छ । हामीले त्यहाँ अधिनायकवादी शासन कायम गर्ने प्रयत्नको तीव्र शब्दमा भ्रत्सना गर्दछौँ । त्यसका साथै त्यहाँ शान्ति, सुव्यवस्था र प्रजातन्त्र कायम गर्नका लागि सम्पूर्ण विश्वका न्याय र प्रजातन्त्र पक्षधर जनताको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छौँ ।”
यसैबीच नेकपा (मसाल) ले पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्यबृद्धि फिर्ता गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । मसालले कतारमा रोजगाररत रहेका कतिपय नेपालीहरू त्यहाँका विभिन्न अस्पतालका कोमामा रहेको जनाउँदै उनीहरूको उपचार र स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेकपा (मसाल) का प्रवक्ता राम प्रकाश पुरीद्वारा २०७४ माघ २० मा जारी प्रेस विज्ञप्ती मा सो माग गरिएको छ । जारी विज्ञप्तीमा अगाडि भनिएको छ– “रोजगारका लागि कतारमा गएका कतिपय नेपालीहरू कैयौँ वर्षदेखि त्यहाँका विभिन्न अस्पतालहरूका कोमामा रहेका समाचारहरू सार्वजनिक भएका छन् । उनीहरूको उपचार र स्वदेश फर्कने व्यवस्था समेत नहुँदा उनीहरूले धेरै कष्टको जीवन बिताउन परी रहेको छ । यससम्बन्धी नेपाल सरकारले अपनाएको व्यवहारले आफ्ना नागरिकप्रतिको गैर जिम्मेवार नीतिलाई बताउँछ । विदेशमा कुनै नेपाली दुर्घटनामा पर्दा विरामी वा मृत्यु समेत हुँदा उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनले व्यवस्था गरेका अधिकारहरूलाई सुरक्षित गर्न पहल गर्नु नेपाल सरकारको दायित्व हुन्छ । त्यस कारण कतारस्थित पीडित नेपालीहरूको उपचार र स्वदेशमा फर्कन समेत आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेकपा (मसाल) ले नेपाल सरकारसित माग गर्दछ ।
हालै आयल निगमद्वारा वृद्धि भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यका कारण सर्वसाधारण जनता र आम उपभोक्ताहरूले चर्को भाडादर र महङ्गी ब्यहोर्नु पर्ने स्थिति सृजना भएको छ । हाम्रो पार्टीले पेट्रोलियम पदार्थमा त्यसरी भएको मूल्यवृद्धिको विरोध गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता गराउन नेपाल सरकारसित माग गर्दछ ।”